Ndị Mmụọ Ọjọọ Hà Dị Adị n’Eziokwu? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kyangonde Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ee. Ndị mmụọ ọjọọ dị adị. Ha bụ ‘ndị mmụọ ozi mehiere emehie.’ Ha nupụụrụ Chineke isi. (2 Pita 2:4) Mmụọ ozi mbụ mere onwe ya mmụọ ọjọọ bụ Setan bụ́ Ekwensu. Baịbụl kpọrọ ya “onye na-achị ndị mmụọ ọjọọ.”—Matiu 12:24, 26.
Otú ndị mmụọ ozi si nupụrụ Chineke isi n’oge Noa
Baịbụl kwuru na e nwere ndị mmụọ ozi nupụụrụ Chineke isi tupu Iju Mmiri oge Noa. Ọ sịrị: “Ụmụ ndị ikom nke ezi Chineke malitere ịhụ ụmụ ndị inyom nke mmadụ, na ha mara mma; ha wee na-alụrụ ndị inyom, bụ́ ndị niile ha họọrọ.” (Jenesis 6:2) Ndị mmụọ ọjọọ ahụ “hapụrụ ebe obibi ha kwesịrị ekwesị” n’eluigwe ma ghọọ mmadụ ka ha nwee ike isoro ụmụ nwaanyị nwee mmekọahụ.—Jud 6.
Mgbe Iju Mmiri ahụ malitere, ndị mmụọ ọjọọ ahụ mere onwe ha ka ha ghọghachi mmụọ ma laghachi eluigwe. Ma, Chineke chụpụrụ ha n’eluigwe. Ihe so na ntaramahụhụ Chineke nyere ha bụ na ha enweghịzi ike ịghọkwa mmadụ ọzọ.—Efesọs 6:11, 12.